ရိုးရှင်းတဲ့ အလှနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းအလှကို ပြသလိုက်တဲ့ အိချောပိုပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
ရိုးရှင်းတဲ့ အလှနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းအလှကို ပြသလိုက်တဲ့ အိချောပိုပုံရိပ်….
September 9, 20190224
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အိချောပိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း မနားတမ်းရိုက်ကူးနေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုကတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုလည်း မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Ei chaw Po fb and Cho Wut Yee
ဒီကနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ အလှပုံရိပ်တွေကို ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်ကနေ မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုကတော့ အနက်ရောင်ကိုယ်ကြပ်ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းအလှနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အိချောပိုကတော့ လက်ရှိမှာ “မှောင်တိုက်” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း အားပေးလိုက်ပါဦးနော် ပရိသတ်ကြီးရေ။
Source : Ei chaw Po fb
မှနမြာနိုငငြံရဲ့ နာမညကြွြော မငြးသမီးတှထေဲက တစယြောကဖြှစတြဲ့ အိခွောပိုကတော့ ပရိသတတြှရေဲ့ အားပေးခစွခြငမြှုတှကေို ရရှိထားတဲ့သူတစယြောကဖြှစပြါတယြ။ သူမကတော့ ရုပရြှငဇြာတကြားကှီးတှကေိုလညြး မနားတမြးရိုကကြူးနတေဲ့သူတစယြောကလြညြးဖှစပြါတယြ။ အိခွောပိုကတော့ ဖစဘြေုတပြေါမြှာ အနုပညာလှုပရြှားမှုပုံရိပတြှကေိုလညြး မွှဝပေေးလရှေိ့တဲ့သူတစယြောကဖြှစပြါတယြ။
ဒီကနမှေ့ာလညြး သူမရဲ့ အလှပုံရိပတြှကေို ဖစဘြေုတပြေါကြနေ မွှဝပေေးလိုကတြာဖှစပြါတယြ။ အိခွောပိုကတော့ အနကရြောငကြိုယကြှပဝြတစြုံလေးကို ဝတဆြငထြားပှီး သူမရဲ့ အမိုကစြား ဘောဒြီကောကကြှောငြးအလှနဲ့ ပရိသတတြှကေို ဖမြးစားလိုကတြာဖှစပြါတယြ။
အိခွောပိုကတော့ လကရြှိမှာ “မှောငတြိုကြ” ဆိုတဲ့ ဇာတကြားကို ရိုကကြူးနတောဖှစပြါတယြ။ အိခွောပိုရဲ့ အနုပညာလှုပရြှားမှုတှကေိုလညြး အားပေးလိုကပြါဦးနြော ပရိသတကြှီးရေ။
မိတ်ကပ်ဆရာပြောင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာ အရင်ကထက်ပိုနုပျိုပြီးလှသွားတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်ပုံရိပ်….